Famadihana nivadika zava-doza Maty teo am-pamonosan-damba ilay ramatoa
Nampihetsika ny aretimpon’ny renim-pianakaviana iray izay nananika ny 60 taona,
avy any Antaninandro Ambodifarihy, Ambatolampy ny nanatrehany ny famadihana ny vadiny sy ny zafikeliny, iray volana lasa izay. Izany no anisan’ny nahaosa ka nindaosin’ny fahafatesana an’i Marie Razafindrakoto, tamin’ny herinandro ambony teo, raha ny filazan’ny reniny. Nanamafy ny dadany fa : « Nijery an’i Nenitoa aho tamin’ny kabary nitokanana ny tsangam-bato vaovao fa tsy nahatomany izy. Hitako gina fotsiny io zanako vavimatoa io nandritra ny namonosana lamba vao ny vadiny sy ny zafikeliny. Raymond Razafindrakoto, vadiny izay maty tampoka noho ny hain-trano taty an-drenivohitra ; ny zafikeliny, Safidy kosa voan’ny vy an’ny hersa nandritra ny fanetsana farany teo ka na efa nialana nenina tany Ambatolampy sy taty taty an-drenivohitra aza tsy tana ny ainy noho ny tetanosy izay nianjady azy», hoy ny dadan’i Marie izay efa mahery ny 80 taonany. Araka ny voalazan’ireo fianakaviany, tapa-bolana mialoha ny famadihana izay hahavitan’ity mpananon-tena sy ny zanany 7 mianadahy ilay fasana vaovao dia niakatra hatrany ny hafanany sy malemilemy ary kely aina izay heverina fa efa aretim-po, hoy ny dokotera. Nandritra ny fotoanan’ny famadihana, tsy nahatelina sakafo mihitsy izy. Torana saika tsy velona ahiana saika nanaraka azy koa ny zanany faravavy raha vao maty ity renim-pianakaviana ity.